Lululook Ouluoqi tambo, tambo inonakidza yeApple Watch | Ndinobva mac
Isu takaedza iyoululoyululo Ouluoqi tambo, tambo inonakidza yeApple Watch
Chinhu chakanaka pamusoro pemhando itsva dzeApple Watch ndechekuti ivo zvese zvinoenderana nezvishongedzo uye tambo kubva mushanduro dzakapfuura uye nekudaro isu tinogona kuenderera tichitarisa iwo mabhanhire ayo asiri echokwadi asi ari chaizvo kukosha.
Mune ino kesi, iyo Chinese yakasimba femuululoululo inotipa isu yako Ouluoq tambo, inonakidza modhi maererano nehunhu hwezvinhu. Iyi 316L isina simbi tambo ine butterfly clasp uye dhizaini inonyatso shamisa nemabatiro ayo anotaridzika seApple yekutanga.
Isu tinofanirwa kutaura kuti ichi hachisi chekutanga Apple tambo zvachose, asi yesarudzo dzese dzatinadzo nhasi pamusika ungave mumwe weiyo mabhanhire akanakisa eApple Watch maererano nehunhu hwezvinhu zvinoshandiswa uye dhizaini. Ngatione mune zvakadzama kuti iyi tambo yeOuluoqi inotipa chii.
1 Kugadzira zvinhu uye dhizaini
2 Rakareruka ruoko chinja
Sezvauri kuona mumifananidzo, dhizaini inotaridzika zvakanyanya senge Apple's tambo tambo, izvo zvaishandiswa gadzira isimbi isina chinhu 316L Uye mumazuva andanga ndichishandisa pane yangu Apple Watch Series 0 ndinogona kutaura kuti haina kana scratch. Jekesa kuti paApple Watch ndine pepa rekudzivirira pachiratidziri uye ndosaka richitaridzika seizvi, hazvisi zvekuti ndinobata zvisina kunaka wachi seizvo vamwe vanondiudza, kunyangwe iri makore matatu uye ichi ndicho chichava shanduko.
Chinhu chakanaka ndechekuti eIyi 42mm tambo inokodzera ichangobva kuburitswa 4mm Apple Watch Series 44, saka ini ndicharamba ndichiishandisa kudzamara ndawana modhi nyowani. Dhizaini yetambo iyi yakanaka uye nzira yatinga gadzirise kuyerwa kwayo iri nyore uye nekukurumidza.
Rakareruka ruoko chinja
Sezvandambotaura pakutanga, nzira yatinga gadzirise tambo kune saizi yedu yechioko iri nyore uye nekukurumidza, mukati mayo ine kuvhara diki uko nekungodzvanya nekutambanudza zvinowedzeredza zvinongedzo zvinobuda. Kuisa zvimwe zvakapusa isu tinofanirwa kuenzanisa chinongedzo uye zvishoma kusimbisa nenzira iyi inogadzira kabhatani kadiki uye inogadziriswa zvizere. Zviri nyore kwazvo kuzvigadzirisa uye ndinogona kutaura kuti mune iyo modhi ye42mm yakakura kwazvo, saka inoshanda kune chero mushandisi.
Chinhu chega chisina kunaka chandinogona kutaura nezve tambo uye iyo yandinowedzera mumapoinzi ekupedzisira ekudzokorora ndechekuti kubvisa zvinongedzo kunodhura zvishoma kuti tiise mune wachi yekutarisa, isu tinofanirwa kuisa iwo maviri mapoinzi kuwatch panguva imwe chete. sezvo isinga tenderere, asi ichi chinhu chinoitika neyakaomarara tambo uye nekudaro kwete kukanganisa kunotyisa futi asi zvakanaka kusangana newe. Muzhinji, dhizaini yacho yakafanana neiyo yepamutemo Apple yekubatanidza tambo, saka tinogona kusimbisa kuti inonyatsokurudzirwa kana ukaronga kutenga yakafanana sitira tambo kune yepamutemo Apple tambo.
38 uye 42mm saizi
Kuti uise tambo unofanirwa kuisa zvimiso zviviri panguva imwe chete
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Isu takaedza iyoululoyululo Ouluoqi tambo, tambo inonakidza yeApple Watch
MacOS Mojave yave kuwanikwa kune vese vashandisi!
Maitiro ekuisa yechitatu-bato maapplication pane macOS Mojave